कमलाले मारेको होइन भने कस्ले मार्यो ? त्यो ठाउँ हेर्दा धनकुटा काण्ड झनै रहस्यमय, गाउँलेको भनाई फरक (भिडियो) – Live25 Media
कमलाले मारेको होइन भने कस्ले मार्यो ? त्यो ठाउँ हेर्दा धनकुटा काण्ड झनै रहस्यमय, गाउँलेको भनाई फरक (भिडियो)
October 18, 2020 adminLeaveaComment on कमलाले मारेको होइन भने कस्ले मार्यो ? त्यो ठाउँ हेर्दा धनकुटा काण्ड झनै रहस्यमय, गाउँलेको भनाई फरक (भिडियो)
धनकुटा महालक्ष्मी १ मा कमला गुरुग नाम गरेकी एक महिलाले गलत मनसायले कोठामा प्रवेश गरेका एक पुरुषको ज्यान लिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । तर अहिले सो घटना रहस्यमय बन्दै गएको छ । स्थानिय बासीन्दाले दिल बहादुर गुरुगंको ज्यान कमलाले नलिएर अरु कसैले लिएको आशंका गरेका छन् । उनीहरुले घटनालाई प्रहरीले फरक ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले घटना मिडियामा आएजस्तो नभएर त्यसको भित्रि रहस्य अर्कै भएको हुनसक्ने बताएका छन् ।
घटना भएको अर्को दिन ति पुरुषको शव घर देखि करिब एक सय मिटर पर फेला परेको थियो । कटहरेकी ३० बर्षीया कमला गुरुङले अनैतिक काम गर्ने उद्देश्य राखेर कोठामा आएका स्थानीय लीलबहादुर गुरुङको ज्या’न लि’एकी’ हुन् । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा महिलाले यस्तो वयान दिएकी हुन् । ३० बर्षीय लीलबहादुर विवाहित रहेको र उनका दुई छोरा छन् । कमलाका श्रीमान् बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा करिब १५ महिना पहिले दुवई गएका छन् । उनी ११ बर्षे छोराको साथमा घरमा भएका बेला घटना भएको हो । हेर्नुहोस भिडियो:
”बैंश छञ्जरी श्रीमती बनायाे, अपांग भएपछि विदेशमै लुक्याे” || आमा-छाेरीकाे बिचल्ली (भिडियो)
१६ बर्षिय छोरीलाई नेपाल आर्मी बुवाले यतिसम्म गरे, छोरी र आमाले रुदै खोले यस्तो डरलाग्दो कर्तुत (भिडियो)
नेपाल आईडलकी रचना रिमालले शिशिर भण्डारीसँग गाईन् गीत || शिशिरले दिए यति धेरै पारिश्रमिक (भिडियो)
२० लाख खर्च गरेर गरिबदुखिका लागि कुमार राइले बनाए यति राम्रो घर (भिडियो)